3GP waa version ah ciriiri ah MPEG4 (MP4) qaabka, oo waxaad noqon kartaa qof aqoon u leh. Waa heerka caalamiga ah abuurista iyo loo maqli karo ee multimedia badan jiilka 3aad shabakadaha wireless. Inkastoo tirada yar ay, 3GP videos noqon karaan tayo aad u sarreeya, iyo xataa mararka qaarkood undistinguishable ka videos MP4. The standard 3GP looga golleeyahay isku bixinta multimedia Taajirku shabakadaha mobile broadband in inta badan qalabka wireless multimedia-karti maanta laga heli karaa.
Qeybta 1: Waa maxay sababta aan u baahanahay in Raadi 3GP TV muujinaysaa?
Qeybta 2: Top 10 Shabakadaha in Download TV
Sida aynu wada ognahay, waxaa jiray koror weyn ee isticmaalka telefoonada gacanta iyo kiniiniyada in dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxa xiiso leh waa in lagu qiyaasay in ka badan 85% oo ka mid ah qalabka dijitaalka ah waxay leeyihiin in loo dhisay si ay u taageeraan qaab 3GP ah. Dhab ahaantii, dadka isticmaala badan waxay og yihiin si loogu badalo videos in 3GP ka hor inta iyaga ku ciyaari qalabka ay. Xaaladaha kale, qalabka isticmaalaa barnaamijyadooda si loogu badalo video ah in 3GP ka hor inta ciyaaro.
Hadda waxaa laga yaabaa inaad naftaada waydiiso, halkaas oo aan kala soo bixi kartaa videos kuwanu? Halkan waxa ku jira 10 websites in ugu horayn ay diiradda saaraan bixiya 3GP videos.
Fztvseries waa website ugu horeeysa ee la siinayo ay muujinayso TV labada AVI iyo 3GP dadweynaha. Dhab ahaantii, ay ka go'an yihiin in ay sii daayaan dhacdo kasta oo 1 saac ka dib marka uu sii daayey. Waxaa kale oo ay leedahay qaybta FAQ ah iyo bogga Facebook ah si ay u caawiyaan dadka isticmaala si dhibta dhibaatooyin. Oo weliba dadka isticmaala, waa ay awoodaan in ay faallo ka tayada videos iyo haddii qof aan kala soo bixi kartaa barta, waxay codsan karaan dadka kale ee si shaqsi ahaan u soo dir video ah.
User dib u eegidda u Fztvseries:
Hey, guys waa weyn yahay. La soco hawsha wanaagsan.
Awesome Stuff, shaqeeyaa weyn on my kiniin.
Speed ​​waa ku weyn yahay. Waxaan ahaa si ay u soo bixi dhacdo oo dhan in dhowr ilbiriqsi awoodaan.
O2tvseries dafo meesha labaad sababta oo ah mid aad u fudud in ay isticmaalaan interface oo xawaare sare. Iyadoo in ka badan 401K kooxaha on Facebook, waa mid ka mid ah website-yada ugu caansan ee ay Misbaax. Videos waxaa laga heli karaa in MP4 iyo qaabab 3GP labadaba. Waxay sidoo kale website ka takhasusay bixiya filimada kulligiis in 3GP.
User dib u eegidda u O2tvseries:
Best abid goobta !!
Great shaqo, u doonaya inuu xilli 2.
A9 Good V9 oo tayo leh.
Website waxay bixisaa ay muujinayso TV ugu dambeeyey, kala saaraa sida alfabeetada isugu xigto. Ay taageere bogga Facebook waa hantida gaadiidka ugu weyn, iyada oo in ka badan 160k ciyaartoyda.
Goobta ugu fiican ee aan abid arko.
Waad ku mahadsan tahay, aad leedahay taageero oo dhan.
Xitaa waxaan Mr.Bean ee videos ... LOL
Fadlan geliyaan S02E07 deg deg ah, waxa uu mar hore ayaa la sii daayay tan oo kale ah 10 saacadood.
New3gpmovies waa hogaamiyaha ee Bollywood muujinaya TV iyo abaalmarino, laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo caan ah oo muujinaya in kale TV. Download xawaaraha waa mid gaabis ah ku daalacashada caadi ah, laakiin haddii aad isticmaasho lagu taliyey UCWEB Browser, waxaad kala soo bixi kartaa dhacdo ka mid ah TV show in ka yar 1 daqiiqo.
Great, waxa ay ku riyaaqay.
Raadineynay noocan oo kale ah tan iyo goobta goobta dheer. Thanks.
Waxay leeyihiin arrin database badan oo ah Ingiriisi iyo Indian muujinaya TV, music iyo barnaamijyadooda. Si kastaba ha ahaatee, waxay inta badan caan ku muujinayaa Musaaricadu sidii ceeriin iyo Abti Down. Waxay mararka qaar goor dambe la muujinaya cusub waa laakiinse iyagu ma ay seegi doona dhacdo qura.
Thanks for this site weyn.
Anigu ma soo bixi kartaa Arrow S01E04.
Marka S05E03 la sii dayn doono?
Tvshows4mobile waa mid aad loo jecel yahay, waayo, wuxuu u dhawyahay hillaacu daayo ay si dhakhso ah. Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay soo sheegaan muujinaya in la sii daayay 30 daqiiqo gudahood ka dib markii ay sii daayey. Si kastaba ha ahaatee, khasaare ka mid ah oo la isticmaalayo this site waa popups dhibsado mar kasta oo aad guji wax. Haddii aad tahay ok arrintan, Tvshows4mobile noqon doonaa mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad sababta oo ah TV weyn oo muujinaysa database.
Video ciyaara fiican ee aan kiniin.
Goobta Awesome for TV muujinaysaa, waayo, waxaad telefoonka gacanta.
Haddii aad ka soo qaaday xayeysiis dhibsado, this site ahaan lahayd mid ah hogaanka 5. Waxay leedahay noocyo kala duwan oo badan oo muujinaya in uu ka soo xusho oo la cusbooneysiiyaa, saacad kasta. Sidaas, waxaad yaqiinsanaysaa si aad u hesho dhacdooyinka cusub ee aad ugu jeceshahay TV show sida ugu dhakhsaha badan hawada. Waxay bixiyaan videos in AVI, MP4 iyo tan ugu muhiimsan oo ah qaabab 3GP.
Dib u eegidda ay taageere bogga Facebook:
Wow, this site uu leeyahay oo dhan ay muujinayso u Waxaan doondoonayaa.
Ma inaan isticmaalaan browser u xawaare fiican?
Tan waxaa ka mid music, bandhigyada TV oo Chine in ay database. Waxa ay leeyihiin dad badan oo muujinaya TV, inkastoo iyo interface internetka isticmaali kartaa fiiriyo qaar ka mid ah. Sidoo kale, tayada videos waa su'aal.
User dib u for fzmovies.co:
La yaabka leh, Oo xataa waxaan helay jir muujinaya TV waayo, telefoonka gacanta.
La soco hawsha wanaagsan.
Mmoviesden.in waa mid ka mid ah ilaha ugu weyn online for filimada Bollywoodka iyo TV muujinaysaa ah ee telefoonada gacanta, kiniiniyada iyo kumbiyuutarada. Waxa ay bixiyaan lacagta kooban oo muujinaya in English TV laakiin waa kuwo aad caan u ah oo dhererkiisu buuxa iyo tayada sare leh filimada 3GP.
Shuqulkii weynaa oo aan kiniin.
Ty, waxaan ka helay oo dhan abaalmarinta waxaan doonayay inaan arko.
Tayada Awesome ay size.
Ugu latest.mobiletvshows, ma run ahaantii aad kala soo bixi kartaa videos si toos ah in 3GP laakiin waxay bixiyaan qalab si toos ah loogu badalo MP4 ama AVI videos ay bixiyaan galay 3GP. Tani waa sababta ma aha sida loo jecel yahay sida adeegyada kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad diyaar u ah la soo dhaafay iyada oo loo marayo in ay yihiin, website uu leeyahay oo keliya ma aha ee ugu dambeeyey ee ay muujinayso TV laakiin sidoo kale waxay bixisaa filimada, dokumantaaryada, Isladooda, iyo wax ka badan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan in ay bixiyaan xawaare aad u sarreeya sababtoo ah waxa ay u adeegtaa wax yar uun dadka isticmaala.
Goobta Good, filimada badan oo muujinaya dambeeyay.
Mahadcelinayaan dadaalkaad muujiseen. Ka helay ka sii badan intii aan raadinayey.
Waxaad guys waa weyn!
> Resource > Video > Top 10 Shabakadaha in Download 3GP TV muujiyaa, waayo, Mobile Phones & Alwaaxdii Our